“Kã M’akoma Bɔ Mu Ma Onsuro Wo Dzin” | Ɔweɔn-Aban Adzesua
Ɔweɔn-Aban—Dza Adzesua Nsɛm Wɔ Mu | June 2020
KENKAN WƆ Abua Acholi Afrikaans Aja Akha Albanian Altai Alur America Mmum Kasa Amharic Amis Angola Mmum Kasa Arabic Argentina Mmum Kasa Armenian Armenian (West) Assamese Aukan Australia Mmum Kasa Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Biak Bicol Bislama Bolivia Mmum Kasa Boulou Brazil Mmum Kasa Britain Mmum Kasa Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chavacano Chichewa Chiga Chile Mmum Kasa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Mmum Kasa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuukese Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Colombia Mmum Kasa Congo Mmum Kasa Costa Rica Mmum Kasa Croatia Mmum Kasa Croatian Cuba Mmum Kasa Czech Czech Mmum Kasa Damara Dangme Danish Digor Douala Drehu Dutch Ecuador Mmum Kasa Edo Efik El Salvador Mmum Kasa English (Borɔfo) Esan Estonian Ewe (Awona) Fijian Finland Mmum Kasa Finnish Fon French French Mmum Kasa Ga (Nkran Kasa) Garifuna Georgian German German Mmum Kasa Gitonga Gokana Greek Greek Mmum Kasa Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Guatemala Mmum Kasa Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Havu Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Honduras Mmum Kasa Hungarian Hungary Mmum Kasa Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Icelandic Idoma Igbo Igede Iloko India Mmum Kasa Indonesia Mmum Kasa Indonesian Isoko Italian Italy Mmum Kasa Japan Mmum Kasa Japanese Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Kenya Mmum Kasa Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kituba Kongo Konkani (Roman) Korea Mmum Kasa Korean Krio Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Laotian Lari Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lolo Lomwe Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Madagascar Mmum Kasa Makhuwa-Meetto Malagasy Malawi Mmum Kasa Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Manyawa Mapudungun Marathi Marshallese Mashi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mexico Mmum Kasa Mfantse Mingrelian Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Motu Mozambique Mmum Kasa Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Nicaragua Mmum Kasa Nigeria Mmum Kasa Niuean Norwegian Nsenga Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Palauan Panama Mmum Kasa Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguay Mmum Kasa Persian Peru Mmum Kasa Philippines Mmum Kasa Pidgin (West Africa) Poland Mmum Kasa Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Mmum Kasa Punjabi Quebec Mmum Kasa Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romania Mmum Kasa Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Runyankore Russia Mmum Kasa Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Saramaccan Sena Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovakia Mmum Kasa Slovenian Solomon Islands Pidgin Songomeno South Africa Mmum Kasa Spanish Spanish Mmum Kasa Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Sweden Mmum Kasa Swedish Taabwa Tagalog Tahitian Taiwan Mmum Kasa Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thailand Mmum Kasa Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Arabic) Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuela Mmum Kasa Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yapese Yoruba (Alata) Zambia Mmum Kasa Zande Zapotec (Isthmus) Zimbabwe Mmum Kasa Zulu
ADZESUA ASƐM 24
“Kã M’akoma Bɔ Mu Ma Onsuro Wo Dzin”
‘Kã m’akoma bɔ mu ma onsuro wo dzin. Jehovah, me Nyankopɔn, medze m’akoma nyina beyi wo ayɛw.’​—NDW. 86:11, 12.
NDWOM 7 Jehovah, Hɛn Botan Kɛse
1. Sɛ wɔkã dɛ yensuro Nyankopɔn a, ɔkyerɛ dɛn? Ebɛnadze ntsi na iyi ho hia ma hɔn a wɔdɔ Jehovah no?
CHRISTIANFO dɔ Nyankopɔn, na wosuro no so. Nyimpa binom hɔn afamu no, bi a wobosusu dɛ nyimpa runntum nndɔ Nyankopɔn na ber kor no ara so wonnsuro no. Naaso, nnyɛ suro a ɔma yɛbɔ hũ ho asɛm na yɛrekã wɔ ha. Yerubosusu suro soronko bi ho. Nyimpa a wɔwɔ osuro a ɔtse dɛm no wɔ obu na enyidzi kɛse ma Nyankopɔn. Afei so, wɔmmpɛ dɛ wɔbɛyɛ biribi a hɔn sor Egya no mmpɛ, osiandɛ wɔmmpɛ dɛ wɔsɛɛ ebusuabɔ a wɔnye no wɔ no.​—Ndw. 111:10; Mbɛ. 8:13.
2. Sɛ yɛhwɛ Ɔhen David ne nsɛm a wɔayɛ ho kyerɛwtohɔ wɔ Ndwom 86:11 no a, ebɛn ndzɛmba ebien na yebosusu ho?
2 Kenkan Ndwom 86:11. Sɛ isusu kyerɛwsɛm yi no mu nsɛm ho a, ibohu pefee dɛ nna Ɔhen David nyim hia a ohia dɛ onya obu kɛse ma Jehovah. Hom mma yɛnhwɛ mbrɛ yebesi dze nsɛm a ofi sunsum mu a David kãe no ayɛ edwuma. Odzi kan, yɛbɔhwɛ siantsir ahorow ntsi a ɔwɔ dɛ yenya obu kɛse ma Nyankopɔn ne dzin. Otsĩa ebien, yɛbɔhwɛ mbrɛ yebesi akyerɛ obu kɛse ama Nyankopɔn ne dzin wɔ hɛn da biara da asetsena mu.
EBƐNADZE NTSI NA ƆWƆ DƐ YENYA OBU KƐSE MA JEHOVAH NE DZIN?
3. Ebɛnadze na bi a ɔboaa Moses ma ɔkɔr do nyaa obu kɛse maa Nyankopɔn ne dzin?
3 Nna Moses hyɛ ɔbotan bi ne mpaae mu ber a ohun enyido-adze dɛ Jehovah n’enyimnyam rutwa mu. Susu mbrɛ Moses tsee nka no ho hwɛ. Nhwehwɛmu nwoma bi kã dɛ: “Obotum aba dɛ iyi yɛ adze a ɔyɛ nwanwa papaapa a nyimpa bi hunii ansaana Jesus reba asaase do!” Moses tsee asɛm a odzi hɔ yi. Ɔda edzi dɛ ɔbɔfo bi na ɔkãa dɛm asɛm no. Ɔbɔfo no kãa dɛ: ‘Jehovah, Jehovah, Nyankopɔn a ayamuhyehye nye adom ahyɛ no mã, ɔfa ebufuw nyaa, na no mbɔbɔrhu nye no nokwar dɔɔ sõ; osie mbɔbɔrhu ma mpempem, na ɔdze emumuyɛ nye mbrato nye bɔn fir.’ (Ex. 33:17-23; 34:5-7) Obotum aba dɛ, sɛ Moses dze Nyankopɔn ne dzin Jehovah dzi dwuma a, nna ɔkaa dɛm asɛm yi. Ntsi, ɔnnyɛ nwanwa dɛ mber bi ekyir no Moses tuu Israelfo no fo dɛ wonsuro ‘enyimnyam dzin a ɔyɛ hũ yi.’​—Deut. 28:58.
4. Jehovah no su ahorow bɛn na sɛ yɛdwendwen ho a obotum ama yeenya obu kɛse ama no?
4 Sɛ yesusu Jehovah ne dzin ho a, ɔsɛ dɛ yɛdwendwen nyimpa kor a Jehovah yɛ ho. Ɔsɛ dɛ yɛma no su ahorow tse dɛ, no tum, ne nyansaa, n’atsɛntsenenee, nye no dɔ tsena hɛn adwen mu. Sɛ yɛdwendwen su ahorow a ɔtse dɛm nye su afofor a ɔwɔ ho a, obotum aka hɛn ma yeenya obu kɛse ama no.​—Ndw. 77:11-15.
5-6. (a) Nyankopɔn ne dzin kyerɛ dɛn? (b) Sɛ yɛhwɛ Exodus 3:13, 14 nye Isaiah 64:8 a, ebɛn akwan do na Jehovah tum ma biribiara yɛ hɔ?
5 Ebɛnadze na yenyim wɔ dza Nyankopɔn ne dzin kyerɛ ho? Nwomanyimfo pii gye to mu dɛ Jehovah ne dzin kyerɛ dɛ “Nyia Ɔma Ɔyɛ Hɔ.” Dza dzin no kyerɛ no ma yehu dɛ biribiara runntum nnsiw Jehovah kwan dɛ ɔbɛyɛ dza ɔakã dɛ ɔbɛyɛ no, na obotum ama biribiara ayɛ hɔ. Ebɛn kwan do?
6 Jehovah yɛ noho dza ohia biara ama ne tsirmpɔw aaba mu. Ɔnam dɛm kwan yi do tum ma biribiara yɛ hɔ. (Kenkan Exodus 3:13, 14.) Asɛmfua “Mara Nye Mara” a ɔwɔ kyerɛwsɛm yi mu no, wobotum so akyerɛ ase dɛ “Mebɛyɛ Moho Dza Mepɛ Dɛ Meyɛ.” Wɔtaa kaa hɛn wɔ hɛn nwoma ahorow no mu dɛ yɛndwendwen Nyankopɔn no su a ɔyɛ nwanwa yi ho. Jehovah botum ama n’asomfo a wɔtɔ sin no ayɛ hɔnho dza ohia biara ama woeetum asom no, na wɔaama ne tsirmpɔw aba mu. (Kenkan Isaiah 64:8.) Jehovah nam dɛm akwan yi do ma ne pɛ tum yɛ hɔ. Biribiara runntum nnsiw Jehovah kwan dɛ ɔbɛma ne tsirmpɔw ahorow aba mu.​—Isa. 46:10, 11.
7. Yebesi dɛn enya enyisɔ kɛse ama hɛn sor Egya no?
7 Sɛ yɛdwendwen dza hɛn sor Egya no ayɛ nye dza ɔama yeetum ayɛ ho a, yebotum enya enyisɔ kɛse ama no. Dɛ nhwɛdo no, sɛ yɛdwendwen ndzɛmba a Jehovah abɔ nyina ho a, ɔka hɛn ma yenya enyisɔ kɛse ma no. (Ndw. 8:3, 4) Afei so, sɛ yɛdwendwen dza Jehovah aboa hɛn ma yɛayɛ mbrɛ ɔbɛyɛ a yebotum ayɛ n’apɛdze ho a, yenya obu kɛse ma no. Jehovah ne dzin yɛ nwanwa papaapa! Nsɛm a ɔfa hɛn sor Egya noho, dza ɔayɛ, nye dza ɔbɛyɛ nyina ka ne dzin no ne nkyerɛase ho.​—Ndw. 89:7, 8.
‘MOBƆBƆ JEHOVAH NE DZIN AKYERƐ’
Nna Moses ne nkyerɛkyerɛ kã akoma. Nna ne nkyerɛkyerɛ no twe adwen si Jehovah Nyankopɔn ne dzin nye no su ahorow do (Hwɛ nkyekyɛmu 8) *
8. Sɛ yɛhwɛ Deuteronomy 32:2, 3 a, ebɛnadze na ɔma yehu fa mbrɛ Jehovah si bu ne dzin no ho?
8 Jehovah kyerɛɛ Moses ndwom bi mu nsɛm ber a nna wɔaka mber kakraabi ma Israelfo no ahɛn Anohoba Asaase no do. (Deut. 31:19) Nna ɔwɔ dɛ Moses dze ndwom no kyerɛkyerɛ Israelfo no. (Kenkan Deuteronomy 32:2, 3.) Sɛ yɛdwendwen nyiyimu 2 na 3 no ho a, ɔda edzi kofee dɛ nna Jehovah mmpɛ dɛ ne dzin bɛyew. Nna ɔmmpɛ dɛ wobobu dzin no dɛ ɔyɛ krɔnkrɔn araa ma ntsi, onnyi dɛ wɔbɔ. Jehovah pɛ dɛ obiara hu ne dzin! Hwɛ ho kwan ara a Israelfo no nyaa dɛ Moses kyerɛkyerɛɛ hɔn Jehovah nye ne dzin a ɔyɛ nwanwa no ho adze! Dza Moses kyerɛkyerɛɛ hɔn no hyɛɛ hɔn gyedzi dzen na ɔhyɛɛ hɔn nkuran tse dɛ mbrɛ nsu petse gu ahaban do ma ɔyɛ prɔmprɔm no. Yebesi dɛn ama hɛn nkyerɛkyerɛ so aayɛ dɛm?
9. Yebesi dɛn aboa ma Jehovah ne dzin ho aatsew?
9 Sɛ yɛreyɛ asɛnka edwuma no a, yebotum dze hɛn Bible edzi dwuma dze aboa nkorɔfo ma woeehu Nyankopɔn ne dzin Jehovah no. Yebotum ama hɔn nwoma a ɔka akoma, yeeyi video ahorow a ɔyɛ fɛw, na yaakyerɛ hɔn ndzɛmba afofor a ɔwɔ hɛn wɛbsaet hɔ a ɔhyɛ Jehovah ne dzin no enyimnyam. Sɛ yɛwɔ edwuma mu, skuul mu, anaa yerutu kwan a, yebotum enya ho kwan dze akã hɛn Nyankopɔn a yɛdɔ no no nye mbrɛ ɔtse ho asɛm akyerɛ afofor. Yebotum akã ndzɛmba papa a Jehovah bɛyɛ ama hɛn nye dza ɔbɛyɛ ama hɛn asaase yi ho asɛm akyerɛ hɔn. Sɛ wɔtse nsɛm a ɔtse dɛm a, obotum ayɛ ber a odzi kan a wobohu mbrɛ Jehovah si dɔ hɛn fa. Aber a yɛrekã hɛn Egya a ɔwɔ ɔdɔ noho nokwasɛm akyerɛ afofor no, nna yɛroboa ma Nyankopɔn ne dzin no ho aatsew. Nkyii so, nna yɛroboa ma nkorɔfo eehu dɛ, wɔakyerɛkyerɛ hɔn atorsɛm pii afa Nyankopɔn ho. Bible mu nsɛm a yɛdze kyerɛkyerɛ nkorɔfo no, ɔno nye adze a ɔma akomatɔyamu papaapa a wobotum esũa.​—Isa. 65:13, 14.
10. Sɛ yɛreyɛ Bible adzesua a, ebɛnadze ntsi na ɔwɔ dɛ yɛyɛ pii sen Nyankopɔn ne mbra ahorow a ɔtsen a yɛbɛma woehu?
10 Sɛ yɛreyɛ Bible adzesua a, yɛpɛ dɛ yɛboa hɛn Bible esuafo ma wohu Jehovah ne dzin na wɔdze dzi dwuma. Bio so, yɛpɛ dɛ yɛboa hɔn ma wohu dza ne dzin no gyina hɔ ma. Sɛ yɛkyerɛkyerɛ hɔn dza wɔnyɛ, Nyankopɔn ne gyinapɛn nye abrabɔ ho mbra kɛkɛ a, ana yebotum aboa hɔn ma woeehu Jehovah yie? Bible suanyi a ɔbɔ noho mbɔdzen no botum esũa Nyankopɔn ne mbra, na oeenya ho enyigye mpo. Naaso, ana obefi ɔdɔ mu ayɛ setsie ama Jehovah? Ma ɔntsena w’adwen mu dɛ, nna Eve nyim Nyankopɔn ne mbra, naaso nna onnyi ɔdɔ mapa mma Nyankopɔn. Adam so ennya ɔdɔ mapa amma Nyankopɔn. (Gen. 3:1-6) Dɛm ntsi, sɛ yɛrekyerɛkyerɛ afofor a, ɔwɔ dɛ yɛyɛ pii sen Nyankopɔn ne mbra ahorow a ɔtsen a yɛbɛma woehu no.
11. Sɛ yɛrekyerɛkyerɛ hɛn Bible esuafo Nyankopɔn ne mbra a, yebesi dɛn aboa hɔn ma woeenya ɔdɔ ama Mbrahyɛfo no?
11 Jehovah ne mbra ahorow do wɔ mfaso ma hɛn ber nyina. (Ndw. 119:97, 111, 112) Jehovah efi ɔdɔ mu na ɔdze dɛm mbra ahorow yi ama hɛn, naaso sɛ hɛn Bible esuafo ennhu no dɛm a, bi a worunnhu mfaso a ɔwɔ do. Dɛm ntsi, yebotum ebisa hɛn Bible esuafo no nsɛm bi tse dɛ: “Ehwɛ a, ebɛnadze ntsi na Nyankopɔn se n’asomfo nyɛ dɛm anaa mma wɔnnyɛ dɛm? Ebɛnadze na iyi ma yehu fa Nyankopɔn ho?” Sɛ yɛboa hɛn Bible esuafo ma wɔdwendwen Jehovah ho na wonya ɔdɔ mapa ma ne dzin a, ɔbɛyɛ mberɛw dɛ yebodu hɔn akoma mu. Nnyɛ mbra ahorow no ho enyigye nko na hɛn Bible esuafo no benya, na mbom wobenya ɔdɔ so ama Mbrahyɛfo no. (Ndw. 119:68) Afei so, hɔn gyedzi bɛyɛ kɛse na wobenya mboa dze egyina nsɔhwɛ a n’ano yɛ dzen a ɔbɛba hɔn do no ano.​—1 Cor. 3:12-15.
‘YƐBƐNANTSEW JEHOVAH NE DZIN MU’
Mber bi mu, David amma n’akoma enndzi mũ (Hwɛ nkyekyɛmu 12)
12. Mber bi mu, David ammfa n’adwen ennsi adze tsenenee do. Osii dɛn baa no dɛm, na ebɛnadze na ofii mu bae?
12 Yehu asɛntsitsir bi wɔ Ndwom 86:11 no. Ɔnye dɛ “kã m’akoma bɔ mu.” Sunsum krɔnkrɔn na ɔkaa Ɔhen David ma ɔkyerɛɛw dɛm asɛm yi. David n’asetsena mu no, ohun dɛ ɔyɛ mberɛw dɛ yɛbɛma kwan ma hɛn akoma eekedzi biribi fofor ekyir. Da kor bi, nna David rutu mpasar wɔ ne dan etsifi. Ohun obi ne yer dɛ oruguar. Ɔbaa no ne dzin dze Bath-sheba. Ber a David hun no no, aso ɔdze n’adwen sii adze a ɔtsen a ɔbɛyɛ do anaa ɔannyɛ dɛm? Nna onyim Jehovah ne mbra a ɔse: ‘Mma w’enyi mmber wo nyɛnko ne yer’ no. (Ex. 20:17) Naaso, David kɔr do hwɛɛ ɔbaa no. N’akoma mu kyɛɛ ebien​—akɔndɔ bɔn a onyae maa ɔbaa no nye ɔpɛ a ɔwɔ dɛ ɔbɛyɛ adze a ɔtsen wɔ Jehovah n’enyi do. Yenyim dɛ nna David yɛ obi a osuro Jehovah na ɔdɔ no, naaso ɔmaa akɔndɔ bɔn a onyae no nyaa no do tum. Osian dɛm ntsi, David yɛɛ ndzɛmba a ɔnntsen. Ɔdze ahorohoraabɔ baa Jehovah ne dzin ho. Afei so, ɔdze ɔhaw kɛse baa nyimpa a hɔnho nnyi asɛm do. Bi mpo kaa nankasa n’ebusua.​—2 Sam. 11:1-5, 14-17; 12:7-12.
13. Yesi dɛn hu dɛ David saan so nyaa akoma a odzi mũ?
13 Jehovah twee David n’aso. Ekyir yi, ɔsaan so nye Jehovah nyaa ebusuabɔ a no mu yɛ dzen. (2 Sam. 12:13; Ndw. 51:2-4, 17) David amma no werɛ eemmfir ɔhaw na atseetsee a ɔfaa mu ber a ɔamma n’akoma eenndzi mũ no. David ne nsɛm a wɔayɛ ho kyerɛwtohɔ wɔ Ndwom 86:11 no, yebotum akã no wɔ kwan fofor do dɛ: “Ma me akoma a odzi mũ.” Ana Jehovah boaa David ma onyaa akoma a odzi mũ? Nyew, osiandɛ mber bi ekyir no, Bible no kãa David ho asɛm dɛ ɔyɛ ɔbarimba a ‘n’akoma dzi mũ wɔ Jehovah ne Nyankopɔn ho.’​—1 Ahe. 11:4; 15:3.
14. Ebɛn asɛm na ɔwɔ dɛ yebisa hɛnho, na ebɛnadze ntsi a?
14 David n’asɛm no yɛ nkuranhyɛ nye kɔkɔbɔ ma hɛn. Bɔn a no mu yɛ dur a ɔyɛe no yɛ kɔkɔbɔ ma Nyankopɔn n’asomfo a wɔwɔ hɔ ndɛ. Dɛ yɛasom Jehovah ber tsentsen o, dɛ mbrɛana yɛahyɛ ase rosom no o, ɔwɔ dɛ yebisa hɛnho dɛ, ‘Ana morokõ etsia mbɔdzen a Satan robɔ dɛ ɔbɛsɛɛ m’akoma no?’
Satan bɔbɔ mbɔdzen dɛ ɔbɛsɛɛ w’akoma. Mma mma no kwan da! (Hwɛ nkyekyɛmu 15-16) *
15. Sɛ yehu mfonyin a obotum ekenyan nda ho akɔndɔ a, ebɛn kwan do na Nyankopɔn ho suro botum abɔ hɛnho ban?
15 Dɛ nhwɛdo no, sɛ ehwɛ TV anaa ekɔ intanɛt do, na sɛ ihu mfonyin bi a otum kenyan nda ho akɔndɔ a, eyɛ w’adze dɛn wɔ ho? Bi a, ɔnnkɛyɛ dzen dɛ ibenya adwen dɛ mfonyin no anaa sene no nnyɛ ndwamansɛm ankasa. Naaso, innhu dɛ ɔyɛ biribi a Satan dze ridzi dwuma ama oeetum asɛɛ w’akoma? (2 Cor. 2:11) Yebotum dze mfonyin a ɔtse dɛm no atoto damba a wɔdze paapaa nyena akɛse mu ho. Ahyɛse no, nyia ɔpaa nyena no bɔ damba no do nkakrankakra kɛpem dɛ damba no n’ano tɛtrɛba no bowura nyena no mu. Sɛ damba no n’ano no wura nyena no mu a, afei ɔbɔ damba no do kɛse ma nyena no mu paa ebien. Aso innhu dɛ mfonyin a okenyan nda ho akɔndɔ no botum ayɛ dɛ damba n’ano tɛtrɛba no? Ahyɛse no, ɔbɛyɛ tse dɛ ma asɛm biara nnyi mfonyin a ɔtse dɛm ho, naaso nkakrankakra no, obotum ama obi aayɛ bɔn etsia Jehovah na asɛɛ n’emudzi. Ntsi, bɔ mbɔdzen dɛ eremma kwan ma biribiara a ɔnnyɛ nnhɛn w’akoma mu! Ma w’akoma ndzi mũ na onsuro Jehovah ne dzin!
16. Sɛ yehyia nsɔhwɛ a, ebɛn nsɛm na ɔsɛ dɛ yebisa hɛnho?
16 Sɛ mfonyin a okenyan nda ho akɔndɔ da nkyɛn a, Satan dze ndzɛmba afofor pii so sɔ hɛn hwɛ ma yɛyɛ bɔn. Yɛyɛ hɛn adze dɛn wɔ nsɔhwɛ a ɔtse dɛm ho? Bi a yebenya adwen dɛ dza ɔdze rosɔ hɛn ahwɛ no nnyɛ bɔn ankasa. Dɛ nhwɛdo no, bi a yɛbɛkã dɛ: ‘Meyɛ adze a ɔtse dɛm mpo a worunnntu me mmfi asafo no mu, ntsi ɔnnyɛ adze a ɔyɛ hũ.’ Adwen a ɔtse dɛm nnyɛ koraa. Ntsi, ɔyɛ papa dɛ yebebisa hɛnho nsɛm bi tse dɛ: ‘Aso Satan dze nsɔhwɛ a ɔtse dɛm resɛɛ m’akoma? Sɛ meyɛ bɔn a, aso ɔremmfa ahorohoraabɔ mmba Jehovah ne dzin ho a? Aso biribi a ɔtse dɛm a mebɛyɛ no bɔtwe me abɛn Nyankopɔn, anaa ɔbɔtwe me efi noho?’ Dwendwen nsɛmbisa a ɔtse dɛm ho. Bɔ mpaa hwehwɛ nyansa a ɔbɛma edze nokwardzi ebua dɛm nsɛmbisa yi. (Jas. 1:5) Sɛ eyɛ dɛm a, obotum ayɛ bambɔ kɛse ama wo. Afei so, obotum aboa wo ma edze akokodur aapow biribiara a Satan dze bɔsɔ wo ahwɛ no, dɛ mbrɛ Jesus yɛe no. Ɔkãa dɛ: “Fi ha fi, Satan.”​—Matt. 4:10.
17. Sɛ w’akoma nndzi mũ a, ebɛnadze ntsi na ɔnnyɛ koraa? Fa mfatoho kyerɛkyerɛ mu.
17 Sɛ hɛn akoma nndzi mũ a, ɔnnyɛ koraa. Fa no dɛ agodzi kuw bi no mufo nye hɔnho nnka. Hɔn mu binom pɛ enyimnyam ama hɔnankasa hɔnho. Binom so mmfa akwankyerɛ a ɔwɔ agodzi no mu no nnyɛ hwee. Hɔn mu dodow bi so mmbu panyin a ɔda hɔn ano no. Ɔbɛyɛ dzen dɛ agodzi kuw a ɔtse dɛm bedzi konyim. Naaso, agodzi kuw a koryɛ wɔ hɔn mu no, ɔrennyɛ dzen koraa dɛ wobedzi konyim. Sɛ erosom Jehovah na ema koryɛ ba wo nsusui, ndzɛmba a epɛ, nye mbrɛ isi tse nka mu a, w’akoma botum ayɛ tse dɛ agodzi kuw a koryɛ wɔ hɔn mu no. Kaa dɛ Satan n’enyi gye ho dɛ ɔbɛsɛɛ w’akoma. Ɔmmpɛ dɛ wo nsusui, ndzɛmba a epɛ, nye mbrɛ isi tse nka no nye Jehovah ne mbra behyia. Naaso, sɛ epɛ dɛ esom Jehovah dze a, ɔsɛ dɛ ema w’akoma dzi mũ. (Matt. 22:36-38) Mma mma kwan ma Satan nnsɛɛ w’akoma!
18. Dɛ mbrɛ asɛm a ɔwɔ Micah 4:5 kyerɛ no, ebɛnadze na esi wo bo dɛ ebɛyɛ?
18 Bɔ Jehovah mpaa dɛ mbrɛ David bɔɔ no mpaa dɛ: “Kã m’akoma bɔ mu ma onsuro wo dzin.” Bɔ mbɔdzen fa yɛ wo botae dɛ edze mpaabɔ yi mu nsɛm bɔbɔ wo bra. Si wo bo aber biara dɛ edze wo gyinaesi akɛse na nkakraba nyina bɛkyerɛ dɛ ewɔ obu kɛse ma Jehovah ne dzin krɔnkrɔn no. Sɛ eyɛ dɛm a, dɛ Jehovah Adasefo no mu kor no, ebɛhyɛ Jehovah ne dzin no enyimnyam. (Mbɛ. 27:11) Nkyii so, hɛn nyina nye nkɔnhyɛnyi Micah bɔbɔ mu akã dɛ: ‘Yɛbɛnantsew Jehovah hɛn Nyankopɔn ne dzin mu daa daa.’​—Mic. 4:5.
EDWEN HO DƐN?
Ebɛn siantsir ahorow ntsi na ɔwɔ dɛ yesuro Jehovah ne dzin?
Yebesi dɛn akyerɛkyerɛ hɛn Bible esuafo wɔ kwan bi do a ɔbɛma woehu ɔdɔ kɛse a yɛwɔ ma Nyankopɔn ne dzin?
Sɛ wɔkã dɛ yennya akoma a odzi mũ a, ɔkyerɛ dɛn?
NDWOM 41 Tsie Me Mpaabɔ
^ nky. 5 Adzesua yi mu no, yɛbɔhwɛ asɛm a Ɔhen David kãe wɔ mpaabɔ mu kyerɛɛ Nyankopɔn a wɔayɛ ho kyerɛwtohɔ wɔ Ndwom 86:11, 12. Sɛ wɔkã dɛ yensuro Jehovah ne dzin a, ɔkyerɛ dɛn? Ebɛnadze ntsi na ɔwɔ dɛ yenya obu a no mu dɔ ma dzin kɛse a ɔtse dɛm? Sɛ yɛwɔ Nyankopɔn ho suro a, ebɛn kwan do na iyi bɛma yekwetsir dɛ yɛbɛyɛ dza ɔnntsen ber a wɔasɔ hɛn ahwɛ no?
^ nky. 53 MFONYIN NO HO NKYERƐKYERƐMU: Moses kyerɛɛ Nyankopɔn no nkorɔfo ndwom bi a ɔhyɛ Jehovah ne dzin enyimnyam.
^ nky. 57 MFONYIN NO HO NKYERƐKYERƐMU: Eve ammpow akɔndɔ bɔn. Naaso, hɛndze, yekwetsir dɛ yɛbɔhwɛ mfonyin ahorow anaa yɛbɛkenkan nsɛm a okenyan akɔndɔ bɔn na ɔdze ahorohoraabɔ ba Nyankopɔn ne dzin ho.
Fa mona Fa mona “Kã M’akoma Bɔ Mu Ma Onsuro Wo Dzin”
w20 June nkr. 8-13
“Marankasa, Mobɔhwehwɛ Mo Nguan”
“Hom Nsan Mbra Me Nkyɛn”
Ndɛ, Sɛ Yɛtse Ntotorobɛnto Ne Ngyegyee A, Ebɛnadze Na Ɔsɛ Dɛ Yɛyɛ?
Text Kyerɛ no mu dza epɛ dɛ etwẽ na ekenkan ƆWEƆN-ABAN—DZA ADZESUA NSƐM WƆ MU June 2020
Fa mona Fa mona ƆWEƆN-ABAN—DZA ADZESUA NSƐM WƆ MU June 2020
ƆWEƆN-ABAN—DZA ADZESUA NSƐM WƆ MU June 2020